Air Conditioner yeMini uye Midi Guta Bhazi kana Yevashanyi Bhazi fekitori uye vagadziri | SONGZ
SZG Series, ye 6-8.4m bhazi reguta uye 5-8.9m bhazi revashanyi, AC yebhazi mini uye midi bhazi
SZGK-ID (Upamhi muna 1826mm)
SZGZ-ID (Upamhi muna 1640mm)
SZGK-IF-D / SZGK-II-D / SZGK-II / FD / SZGK-III-D (Upamhi muna 1826mm)
SZGZ-IF-D / SZGZ-II-D / SZGZ-II / FD (Upamhi muna 1640mm)
SZG akatevedzana rudzi denga akatasva mhepo conditioner. Inoshanda kune 6-8.4m bhazi reguta uye 5-8.9m bhazi revashanyi. Kuti uve nehupamhi hwakawanda hwekushandisa kwema modhi ebhazi, pane marudzi maviri ehupamhi hweiyo SZG nhevedzano, muna 1826mm uye 1640 zvichiteerana. Kuti uwane rumwe ruzivo ndapota tarisa pazasi kana iwe unogona kubata nesu pa sales@shsongz.cn kuti uwane rumwe ruzivo.
Technical Ratidziro yeBhazi A / C SZG Series:
Muenzaniso (Narrow vhezheni):
8 kW kana 27296 Btu / h
12 kW kana 40944 Btu / h
16 kW kana 54592 Btu / h
10 kW kana 34120 Btu / h
14 kW kana 47768 Btu / h
18 kW kana 61416 Btu / h
AK33 (TM31 inosarudzika)
Muenzaniso (Wide Version)
SZG-IX-D Ruzivo rwehunyanzvi SZGK-ID Ruzivo rwehunyanzvi SZGK-IF-D Ruzivo rwehunyanzvi
SZGK-II-D Ruzivo rwehunyanzvi SZGK-IIF-D Ruzivo rwehunyanzvi SZGK-III-D Ruzivo rwehunyanzvi
SZG-XD Ruzivo rwehunyanzvi SZGZ-ID Ruzivo rwehunyanzvi SZGZ-IF-D Ruzivo rwehunyanzvi
SZGZ-II-D Ruzivo rwehunyanzvi
4. Compressor VALEO kana AOKE inosarudzika.
SZG Series R & D Kwakashure:
Nekuvandudzwa kwehunhu hwehupenyu hwevanhu, inodiwa nyaradzo nhanho iri kuramba ichikwira nekukwirisa, zvichikonzera kuwanda uye zvakanyanya kuomesera zvinodiwa zveanodzora mamhepo muOEM, kusanganisira kutaridzika kwemhepo inotonhorera, kugona kutonhora, ruzha, nezvimwe. iyo SZG nhepfenyuro yakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa nevatengi zvakanyanya, zvichibva pakudzivirirwa kwezvakatipoteredza, simba uye zvekuchengetedza zvinhu, kugona kugadzirisa, kudzikisira huremu, ruzha ruzha uye kudedera, kuchengetedzeka uye kuvimbika, uye kugadzikana zvine hushamwari. SONGZ zvigadzirwa zvitsva zvinogara zvichiratidzwa kusangana nezvinodiwa mumusika.
Yakatsanangurwa Yehunyanzvi Kuzivisa kweSZG Series Bhazi Mhepo Inodzora
1. Yakakwira-inoshanda tekinoroji condenser
Iyo condenser yakaiswa mudenga, iine nzvimbo hombe yakatarisana nemhepo, uye mamhepo inoumbwa pamativi ese maviri evhavha yepamusoro yeiyo condenser, iyo inoenderera ichideredza kusagadzikana kwemhepo kweiyo condenser uye inovandudza kupisa kwekuchinjana kushanda.
Dhizaini yeiyo condenser isina pasi girobhu dhizaini dhizaini. Hurefu hwese hwechigadzirwa haupfuure 2,5 metres. Chimiro chechimiro chakabatana. Iyo yepamusoro dhizaini inogadzira chigadzirwa chiyereso muhuremu, uye vhoriyamu mune diki.
3. Yepamusoro-tech zvigadzirwa zvinoshandiswa
SZGZ (yakamanikana muviri) zvigadzirwa, yepasi gomba zvinhu zvakagadzirwa neLFT + aluminium alloy zvinhu. Inofananidzwa nezvimwe zvinhu zvinoumbwa, ine yakasimba kuomarara uye yakatarwa simba, yakanaka kusagadzikana kusagadzikana; kunatsiridza kukwira kuramba, uye kudzikama kwakanaka kwekuenzana. Iko kuneta kurwisa kwakanyanya, uye huremu hwese hwechigadzirwa hwaderedzwa neinenge 15%.
4. Nyore Kugadziriswa
Kavha yepamusoro yeSZG yakafara-muviri nhevedzano yemhepo inogadzirisa condenser inotora hinge yekubatanidza chimiro. Iko hakuna kudikanwa kwekubvisa iyo yese chivharo ndiro kana kurodha mota, iyo inoponesa zvakanyanya nguva yekumisikidza. Iyo fan inodzikisira yakaiswa kubva kumusoro, saka hapana chikonzero chekuvhura iyo chifukidziro kana uchibvisa iyo inodzora fan. Kana mota iri kubuda iri kugadziriswa, zvinongofanirwa kuvhura mabutiro edivi, ayo ari nyore mushure mekutengesa sevhisi.
5. Dhizaini yeKuchengetedza
Rutivi danda redenga rakakwidziridzwa evaporator rinobvisa yechipiri kubatana, uye duct yemhepo yegungano revaporator inotora hunyanzvi hwepazasi girazi rakabatanidzwa rakakombama chimiro, icho chisingagone chete kudzikisira huremu hwechigadzirwa, asi zvakare kudzivirira zvinobudirira njodzi yakavanzwa ye kubuda kwemvura pamazuva ekunaya.
6. Wide akasiyana ekushandisa
Iyo yakazara yakazara SZG yakakodzera mabhazi kubva pa6 kusvika 8.4 metres uye yebhazi revashanyi kubva pamashanu kusvika 8.9 metres. Panguva imwecheteyo, hupamhi hwese hweSZGZ (rakamanikana muviri) mhepo inodzora uye nzvimbo iri panobuda mhepo ndeye180mm, inova 120mm diki pane iro rakakura muviri, iro rinogona kuiswa kune diki kana rakatetepa bhazi.
Iyo SZG Series Bhazi AC Mabasa Inosimudzira, Inesarudzo）
1. Plumbing uye kudziyisa tekinoroji
3. Inoshanda kune Ultra-yakaderera Temperature
Inogona kuwedzera fan yekudzora uye kugadzirisa iyo sisitimu zvine musoro, iyo inokodzera iyo 10-12m bus bhazi remhepo muzhizha munzvimbo dzinotonhora dzakadai seNorth Europe.
Pashure: Bhatiri Thermal Management Sisitimu yeMagetsi Bhazi, uye Kochi
Zvadaro: Air Conditioner yeBhazi, Murairidzi, Bhazi rechikoro uye Bhazi rakataurwa